Mabhuku aLope de Vega anomiririra nhaka yakakura kwazvo. | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku aLope de Vega
John Ortiz | | Biography, Bvunzo, Vanyori, Literature, Nhetembo, Nyaya, dzakawanda
Munyori Félix Lope de Vega.
Felix Lope de Vega Carpio aive munyori wechiSpanish akaberekwa munaNovember 25, 1562 muMadrid. Akatanga kuburitsa zvinyorwa kubva padiki diki, yakatsaurirwa rudo rwake rwakakundikana uye zvimwe zvakaitika. Mabhuku aLope de Vega anomiririra nhaka inoshamisa yezvinyorwa zveSpanish. Kunyora hwaive hupenyu hwake hwese, uye iye akangorega kuburitsa tsamba munguva pfupi asati afa, musi waAugust 25, 1635.
Lope de Vega yaive chikamu chakakosha cheGolden Age, iyo inoonekwa senzvimbo inobereka zvibereko kwazvo yetsamba dzeSpanish nehunyanzvi. Munguva yehupenyu hwake munyori akaburitsa mazana emabasa, kusanganisira nhetembo, comedies, epics, sonnets uye kunyangwe zvinyorwa zvidiki.
1 Munyori wechidiki
2 Lope rakafarirwa
3 Kufambira mberi kwebasa rako rekunyora
4 Lope de Vega, mupristi
5 Zvimedu zvemamwe mabhuku naLope de Vega
5.1 Ovejuna Tsime
5.2 Imba Amaryllis
6 Themes emabhuku aLope de Vega
7 De Vega, protagonist wemabasa ake
Lope akasimuka kubva pakutanga kwekudzidza kwake; pazera ramakore mashanu aigona kuverenga muchiSpanish nechiLatin, nekuwedzera mudiki akanyora nhetembo dzake dzekutanga mukati memakore ake ekusava nemhosva. Mumakore ake ekuyaruka, Vega yakaburitsa mana-maitiro comedies; rimwe remabasa ake ekutanga erudzi urwu rakanzi Anoda zvechokwadi.
Lope akasimuka kubva kune vamwe vese zvakanyanya, kusvika padanho rekuti nekuda kwekugona kwake kukuru, chikoro cheVicente Espinel chakamupa kukudzwa kwekudzidza pazvivakwa zvacho. Iyo knight yeIlcascas Yakanga iri imwe yemakomedhi ake uye akafunga kuitsaurira kuna Espinel, sezvo aive mumwe munhu waaiyemura.
Akafunda chikoro chesekondari pachikoro chekudzidzisa cheSosaiti yaJesu - icho chakazove Imperial College - ikoko akazivana nemaJesuit. Muna 1577 akaenderera mberi nekudzidziswa kwake paUniversity yeAlcalá, Colegio de los Manriques. Kunyange zvakadaro, Lope haana kupedza denderedzwa redzidzo yepamusoro, saka haana kuwana chero degree.
Elena Osorio aive mukadzi wake wekutanga, uye zvaireva zvakawanda kwaari. Hukama uhu hwakaguma nekuti akatanga hukama hwekufarira zvemari nemurume anokudzwa. Lope de Vega akashungurudzika uye akakumikidza mavhesi mashoma pamusoro paElena nehama dzake. Zvemukati memazita ake zvaive nesimba uye zvinonyadzisa uye munguva idzodzo yaive mhosva yekukudza, saka akaendeswa kujeri uye akadzingwa kwenguva
Iyo Dorotea yakanga iri bhuku rakatsaurirwa kuna Elena, uye zvinoshamisa kuti, bhuku rakaona mwenje wevanhu muna 1632, makore mashoma munyori asati afa. Zvisinei panguva yaakanyora iri basa, Lope aive nemukadzi mutsva anonzi Isabel de Alderete waakaroora naye musi waMay 10, 1588.
Isabel akashaya muna 1594, mavhiki mushure mekubereka, uye Lope akatsaurirwa Arcadia, bhuku raakaburitsa mavhesi enhetembo Mukadzi wake wechitatu ainzi Antonia Trillo uye vakapomedzerwa murongo, iyo panguva iyoyo yaivewo mhosva. muna 1598 akadanana naJuana de Guardo, mwanasikana wemunhu ane mari zhinji; asi aive nevadikani vazhinji, kusanganisira Micaela de Luján.
Kune vese vana vepamutemo uye hukama hwaive naLope de Vega, aifanira kushanda zvakanyanya. Zviuru zvezvinyorwa zvekunyorwa kweSpanish zvakatorwa kubva padanho rino, yakawanda yenhetembo, comedies uye enganonyorwa hazvina kupedzwa, zvine zvikanganiso uye kumhanya kwaifanirwa kuzviburitsa naLope zvinoonekwa.
Quote naLope de Vega - Ofrases.com.
Kufambira mberi kwebasa rako rekunyora
Pakutanga kwezana regumi nemanomwe century de Vega akakwanisa kugadzirisa dzakawanda dzenyaya dzake uye akatsvaga nzira yekuti mabasa ake ave nekodzero. Mazhinji emakomedhi ake aishandiswa pasina mvumo, izvo zvakanetsa Lope; zvisinei haana kuwana kodzero asi akatenderwa kugadzirisa zvigadzirwa zvake. Nekuda kwekusiyana uye kubereka kwebasa rake, akadaidzwa «Phoenix weWits ».
Muna 1609, paChikoro cheMadrid, munyori akapa rondedzero yake sekutaura Nyanzvi nyowani yekugadzira comedies panguva ino, basa rakanyorwa mundima. Kubudikidza nebasa iri, rine anopfuura mazana matatu emavhesi, munyori akazivisa nguva dzake dzakasiyana dzemufaro nekusuwa.
Lope de Vega, mupristi
Muna 1611 paive nekuedza kumuuraya, uye shamwari yake nemukadzi wake vakaparara mumakore akatevera. Iyi nhevedzano yezviitiko zvakaratidza zvakanyanya mudetembi, uyo akatsvaga kupotera muchitendero kuburikidza nehupirisita, chishuwo chakazouya kwaari muna 1614.
Munyori akafunga kutora ese aya manzwiro uye manzwiro mune rakanzi basa Nziyo dzinoyera. Mundima idzi Lope akashandisa rumwe ruzivo rwake rwakawanikwa muSosaiti yaJesu kuburikidza nebhuku Kudzidzira Kwemweya, chinyorwa chaitsvaga kusimbisa zvitendero zveKaturike kuburikidza nekufungisisa uye zvimwe zviito zvepfungwa.
Munguva yake semupirisita, Lope de Vega akatanga kufarira Marta de Nevares, asi nekuda kwekuti aive azvigadzirira kutenda kwake kutsva, aisakwanisa kuratidza rudo rwake kwaari uye akasarudza kupa nhetembo dzinoverengeka nehunhu ihwohwo.
Zvimedu zvemamwe mabhuku naLope de Vega
Heano zvidimbu zvemamwe mabasa naLope de Vega:
“Tenzi: —Uchandiona ndiri pabhiza nhasi, ndichiisa pfumo pakagadzirira.
Laurencia: -Kazhinji kupfuura zvandati ndadzoka pano!
Pascuala: -Shuwa, ndakafunga kuti pandakakuudza nezvazvo, zvinokupa kuzvidemba kukuru.
Laurencia: -Zve kumusoro kudenga kuti handina kumbomuona muFuente Ovejuna! ”.
"Amarilis anoimba, uye izwi rake rinokwira."
mweya wangu kubva munzira yemwedzi
kune njere, kuti hapana
hers zvinotapira kutevedzera.
Kubva pane yako nhamba ipapo ini ndakaisazve
kuchikamu, icho choga chiri… ”.
Themes emabhuku aLope de Vega
Ruzhinji rwe zvinyorwa zvake nemitambo zvine chekuita nenyaya dzerudo, kuda uye rudo, rangano yenyaya idzi ndiyo yakaita kuti munyori ararame. Mamwe mabasa ane iyi theme ndeye: Kuda asingazive kuti ndiani, Chishamiso knight, Simbi yeMadrid y Anoda akangwara.
Mukati memazana ezvinyorwa zvakanyorwa nemunyori pane misoro mizhinji yakasiyana, huzivi uye komedhi zvaive zvakakosha kubasa remunyori. Panguva iyoyo paive nekushungurudzwa nevanhu vepamusoro soro kune vanoshaya kana vevashandi, nekuti iyi Lope yakaratidzira mumabasa akadai se: Ovejuna Tsime, Meya akanakisa y Knight weOlmedo.
Mabhuku akati wandei naLope de Vega.
De Vega, protagonist wemabasa ake
Munyori haana kutaura nezvake zvakajeka munyaya dzake; Zvisinei Lope de Vega akagadzira hunhu hwaimumiririra uye hunotakura zita raBelardo. Iye munyori akataura nyaya yerudo yemurume uyu, shuwa kwake kudanana uye kutambura kwake kwekusamuwana.
Kunyangwe aive murume wechikadzi mumakore ake ehudiki, sezvaakakura akazvisimbisa semumwe wevanyori vane tarenda muSpain. Kana paine chimwe chinhu chakaratidza, ndizvozvo Lope akazvipira iye kunyorera vanhu. Munyori aigara achisimbisa kuti aive nekwanisi yekugadzira mutambo mumaawa makumi maviri nemana, zvinonzi akanyora kunyangwe panguva dzekudya. Mutsara wekuti "unobva kuna Lope" wakave wakakurumbira uye wakaramba uchishandiswa kureva zvinyorwa zvekunyora kwake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku aLope de Vega
Iwo mapfumbamwe eakanyanya makomiki eMortadelo uye Filemón
Andrea Camilleri anofa. Commissioner Montalbano vanosara vari nherera